Fahavitan’ny CEPE, Antenimiera mifandriro-kevitra, fanakatonana ny orinasa AAA, fitrandrahana volamena... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rasoanjanahary il y a 4 mois
Fahavitan’ny CEPE, Antenimiera mifandriro-kevitra, fanakatonana ny orinasa AAA, fitrandrahana volamena manimba ny tontolo any Vohilava-Mananjary, fivoaran’isan’ny ‘covid-19’
Zavatra maro no mbola misafotofoto amin’izao fialana miandalana amin’ny fihibohana anatin’ny hamehana ara-pahasalamana izao raha ny fampitam-baovao samihafa amin’ny radio sy ny televiziona ary ny gazety an-tsoratra, amin’izao fiandohan’ny volana septambra izao.
Na dia nisy aza ny ahiahin’ny sokajin’olona sasany, dia tontosa tamin’ny 1 septambra ny fanadinana CEPE tao amin’ny faritany roa, faritanin’Antananarivo sy Antsiranana. Miisa 172 461 ireo mpiadina ao amin’ny faritanin’Antananarivo, ary 54 475 ny ao amin’ny faritanin’Antsiranana. Tsikaritra fa misy ireo mpiadina tsy tonga.
Tsy nampitovy hevitra ny vaomiera najoro teo anivon’ny antenimiera roa tonta (Commission mixte paritaire) ny fandaniana ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 noraisin’ny filoham-pirenena tamin’ny alalan’ny hitsivolana, niantsoana fivoriana tsy ara-potoana naharitra 12 andro nanomboka tamin’ny 26 aogositra. Niafara tamin’ny famerenana azy tany amin’ny governemanta izay namerina azy tany amin’ny Antenimieram-pirenena ka nolanian’ny depiote ihany tamin’ny 1 septambra 2020. Nanamarika anefa ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao fa misy tsy ara-dalàna ny fizotran’ny raharaha. Ao anatin’io volavolan-dalàna io ny fanenana ny isan’ny loholona ho 18 raha 63 amin’izao izay noantitranterin’ny minisitry ny Serasera Lalatiana Andriatongarivo fa tsy maintsy ravana satria mandany vola, araka ny fampanantenan’ny filoham-pirenena. Araka ny Lalàm-panorenana dia lany fe-potoam-piasana amin’ny volana janoary 2021 ireto loholona ankehitriny.
Nakaton’ny fanjakana tamin’ny 1 septambra 2020, araka ny taratasy avy amin’ny foibem-pitondrana momba ny hetra, ny orinasa AAA an’ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana any Andranomanelatra Antsirabe, noho ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fisiany ary eo koa ny tsy fahaloavan-ketra. Efa nakatona talohan’izany, tamin’iny volana aogositra iny, ny ao Antananarivo sy Toamasina. Nampiaka-peo momba io fanapahan-kevitra io ny sokajin’olona samihafa izay nanamarika fa antsojay amin’ny fandraharahana izany, ary famonoana ireo mpiasa mivelona amin’ilay orinasa.
Notaterin’ny haino aman-jery tamin’ny 2 septambra teo ny fanjakazakan’ny orinasa sinoa mitrandraka volamena any amin’ny Kaominin’i Vohilava, disitrikan’i Mananjary, ka nampihetsika ny fokonolona any an-toerana ary nanaovan’izy ireo antso amin’ny fitondram-panjakana mba hijery ny toe-javatra izay manimba ny tontolo iainana.
Mitohy hatrany ny fanomezana ny antontanisa ofisialy momba ny fivoaran’ny ‘covid-19’ ataon’ny mpitondra teny ofisialy, ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, amin’ny radio sy ny televiziona rehetra. Miisa 844 sisa ireo manaraka fitsaboana tamin’ny 1 septambra, maherin’ny 93% ny taham-pahasitranana, ary latsaky ny 10% ny tahan’ireo mitondra ny tsimokaretina amin’ny atao fitiliana. Eo amin’ny maty, raha 181 no fitambaran’ny maty tamin’ny 26 aogositra, dia 196 izany tamin’ny 2 septambra, izany hoe nisy maty 15 tanatin’ny herinandro. Manantitrantitra hatrany anefa ny mpitondra teny momba ny ‘covid-19’ fa mbola mitoetra ny fitandremana sy fanarahana ny fepetra toy ny fanaovana aro vava sy orona, ny fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony na ‘gel désinfectant’, ny fanajana ny elanelana 1 metatra.
Aty Afrika, araka ny antontanisan’ny OMS, dia 1 245 286 ireo tratran’ny tsimokaretina ‘covid-19’ tamin’ny faran’ny volana aogositra, ary 29 581 no namoy aina. Vitsy izany raha mitaha amin’ny isa maneran-tany izay 25 tapitrisa mahery no tratran’ny tsimokaretina ary maherin’ny 830 000 no namoy aina.